अस्पतालको शैयाबाटै अमिताभको अर्को पोष्ट, 'भगवान् मलाई साथ दिनुस्' | My News Nepal
२०७७ असोज ५ गते
अस्पतालको शैयाबाटै अमिताभको अर्को पोष्ट, 'भगवान् मलाई साथ दिनुस्'
२०७७ साउन १० गते
मुम्बई । करिब २ साता अघि कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि मुम्बईस्थित नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका अमिताभ बच्चन सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो अवस्थाको अपडेट गराइरहेका छन् । आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आम जनमानसले गरेको चिन्ताका विषयमा जानकार अमिताभले बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अपडेट गराइरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा उनको कोरोना नेगेटिभ आएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि ट्वीटरमार्फत् सो समाचार झुठ भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका बच्चनले अहिले इन्स्टग्राममा फेरी अपडेट गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा उनको इन्स्टाग्रामको नयाँ पोस्ट चर्चामा छ। जसमा उनले आफ्नो स्वास्थ्य लाभका लागि भगवानसँग प्राथना गरेका छन्। दर्शक एवं आम मानिसको भिडसहितको फोटोमा उनले क्याप्सन लेखेका छन् –'तपाईंहरूले मतर्फ उठाउनु भएको माया र साथको हातले मलाई हौसला दिन्छ। र, म यो कहिले पनि गुमाउन चाहन्न। यसका लागि मलाई साथ दिनुस् भगवान्।'
विश्वसँगै भारतमा पनि बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणका कारण उनीसँगै छोरा अभिषेक, बुहारी ऐश्वर्या र नातिनी आरध्या पनि संक्रमित भए। हाल परिवारका चारै जना नानावती अस्पतालमा उपचाररत छन् । अमिताभ पत्नी एवं अभिनेत्री जया बच्चनमा भने संक्रमण देखिएको छैन।
नेपालमा थप १३२५ संक्रमित, हालसम्म संक्रमित संख्या ६४ हजार नाघ्यो
पावरफुल इन्स्पेक्टरहरुका कारण आईजी ब्याक !
कोभिड–१९ को नियम तोड्नेलाई १५ लाख जरिवाना !
संविधान दिवसको अवसरमा शुभ बिहानी नेपालद्धारा दिप प्रज्वलन
प्रहरी वृत्त थिमिका १३० मध्ये ६३ प्रहरीमा कोरोना संक्रमण
उपत्यकामा पछिल्लो २४ घन्टामा थप ७६७ नयाँ संक्रमित, ६ जनाको मृत्यु